KO'kubo Guam Hut - I-Airbnb
Ikamelo e-iqhugwane ibungazwe ngu-Aida
U-Aida Ungumbungazi ovelele
I-KO'kubo Hut iyingqayizivele yokuhlala kwakho endlini yangasese ethokomele yokhuni noqalo eyakhiwe eduze kwesihlahla sikamango. Igumbi lokulala elizimele kanye negumbi lokuphumula lihlotshiswe ngeqabunga elenziwe ngesandla elinodonga oluphindwe kabili kanye nokuhlobisa komdabu okumibalabala. Vumela umoya opholile ukuyise ezweni lamaphupho lapho uvula amafasitela amane anezikrini ekamelo lesimanjemanje - noma uvule i-aircon futhi ujabulele ukunethezeka kokuphila kwesimanje! Nethezeka ebhentshini loqalo eduze nendawo yokuphumula, futhi ujabulele umango olenga phansi, ukwatapheya noma isobho esilungele ukuvunwa!
Iqhugwane lingaphansi noma eduze kwesihlahla sikamango lapho isiqu siyingxenye yeqhugwane - umklamo oyingqayizivele ngempela onendawo yokulala yesimanje nenethezekile, nokho umuzwa wendawo yonke indawo.
Indawo yokuhlala iyindawo ethule kakhulu, ephephile, futhi efinyeleleka kalula, kude nomsindo wedolobha, kodwa iseduze kakhulu nokudla okusheshayo, izitolo ezinkulu, indawo yokubuka indawo nje 7-10 mins ngemoto. Kukhona nezitolo ezimbili zomama nezase-pop kanye nomata wokuwasha phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo. Siseduze kakhulu neMicronesia Mall, Two Lover's Point, Dededo Flea Market, KFC, Winchells, Jamaican Grill, Taco Bell, nezinye izindawo zokudlela namakhefi amaningi.
Mina nomyeni wami sihlala esakhiweni esisodwa futhi sihlala sitholakala ukuze sisize.